Default Musoro - £ 38.99 GBP uwandu
Regular price £ 38.99
kana 6 vhiki nevhiki isina mubhadharo kubhadhara kubva £ 6.49 ne
Chii chinonzi Ostarine (MK2866)?
Iyo yekutenderera-yese iyo inogona kushandiswa yega kana kurongedzwa. Inogona kushandiswa kubva pamasvondo mana kusvika gumi nemaviri uye vashandisi vanovaka yakaonda, yakaoma mhasuru uye vanogona zvakare kutarisira kuona kuoneka kudzikiswa kwemafuta emuviri kupa chikafu kuri kutarisa. Dosage inogona kubva pa4mg-12mg pazuva uye mhedzisiro ye5kg yemhasuru inowana mumavhiki matatu inogona kuwanikwa.
Ostarine (MK2866), sarudzo yepasirose inonyanya kufarira kuvaka mhasuru uye kupisa mafuta emuviri panguva imwe chete, yave imwe yeanonyanya kufarirwa Selective Androgen Receptor Modulators munguva dzichangopfuura.
Dzorerazve muviri wako nekukunda kuonda kwemhasuru uye kurwisa mafuta emuviri neMK2866 izvozvi!
Zvakanakira Ostarine (MK2866)
Inogadzira zviitiko zvinoshamisa mukati menguva pfupi yenguva.
Mashandisiro Aungaita Ostarine (MK2866)?
Ostarine (MK-2866) inoshandiswa zvakanyanya mumasekonzi emavhiki masere kusvika gumi nemaviri nevarume uye masvondo masere kusvika matanhatu nevakadzi kunyange izvi zvichizosiyana zvichienderana nezvinodiwa nemunhu mumwe nemumwe uye nezvinodiwa kutenderera.
Iyo yakakurudzirwa muyero weOstarine (MK2866) yevarume iri pakati pe15-25mg kwemavhiki masere kusvika gumi nemaviri panguva yekucheka (kunyanya maminetsi makumi matatu kusvika kumakumi mana usati wadzidzira uye mushure mekudya.). Kwezvikamu zvekubowa, iyo yakakurudzirwa dhizaini yeOstarine (MK-30) yevarume ndeye 40-2866mg kwenguva masere kusvika gumi nemaviri mavhiki (kunyanya maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana usati wadzidzira uye mushure mekudya.).
Kune vakadzi, iyo yakakurudzirwa dhizaini yeOstarine (MK2866) ndeye 5-10mg mazuva ese (ndoda maminetsi makumi matatu kusvika makumi mana usati wadzidzira uye mushure mekudya) mukutenderera kwemavhiki matanhatu kusvika masere.
MK-2866 inonyanya kurongedzwa nemaSARM senge S4 (Andarine) uye Cardarine (GW-501516) yekucheka uye neMK-677, LGD-4033, uye RAD-140 (Testolone) yekubhururuka.
Simba vatambi uye vavaki vemuviri vanoshandisa MK-2866 vaudza mabhenefiti anoshamisa maererano nekudzoreredza. Izvi zvinonyanya nekuti Ostabolic inobatsira kurasikirwa nemafuta emuviri uye kuwana mhasuru mashoma panguva imwe chete.
Vashandisi zvakare vanotaura zvakakosha kuwana uye kugadzirisa maererano nekusimudza mashandiro.
MK-2866 inoonekwa seyakakodzera kune vanhu vakanamatira mukati yepasi kudzidziswa uko vasingakwanise kana kuwana simba ravanoda kana saizi yemhasuru yavanotarisira.
Inobatsira mhasuru kuburitsa simba guru kukunda giravhiti, kuramba, kana zvese zviri zviviri.
Zvakanakira maererano nemabhonzo, tendon, uye ligaments zvakataurwa nevashandisi pamadosi zvakaderera se12.5mg mazuva ese.
Gadzirira kuenda wakatsiga uye uvandudze anosimudza nezvakawanda seanosvika makumi matatu kusvika makumi mashanu emakumi mashanu muzana uchinge uchiwana gumi nemashanu kusvika pamakumi mashanu ematani ehuremu hwemhasuru.
Tinokurudzira Mini PCT nechigadzirwa ichi, mavhiki e4-6 akakodzera.
avhareji chiyero 4.8 kubva 5
Kubva paongororo dze 254
RdG Yakadzokororwa naRGG
Ini ndaive neOstarine kubva kune imwe mhando uye LGD ka2 kubva kuSarms Chitoro Iyi ostarine inyoro nyoro, yenguva iyo isina chero mhedzisiro mushure memasvondo mashanu / matanhatu. Ini ndakangoona yakanaka pombi uye zvishoma vasculair, kwete hombe kuwana kana kurema kuwedzera, zvakanaka panguva yezhizha.
S Yakadzokororwa naS
Kurera huremu sevamwe
Mumwe wangu akashandisa izvi uye mumazuva mashanu anga atoona mutsauko. Inoita kuti utapire zvakanyanya munzvimbo yekurovedza muviri ... kupfuura zvakajairwa
J M. Yakadzokororwa naJ.
Ichi chigadzirwa ndicho chiitiko chaicho. Hapana mhedzisiro uye inopa yakanaka pombi uye ndinogona kuzviona ndichitetepa (zvishoma asi zvichiri kuoneka).
Haugone kumirira kuti unyatsopinda mukutenderera kwangu uye uone zvakapedzisira kuitika mumavhiki mashoma.
John H. Yakadzokororwa naJohn H.
1 vhiki iri
Ndiri vhiki mukati mekutenderera kwangu uye handina kumbove nemhedzisiro. Wakaona yangu yekudzoreredza nguva iri kuwedzera uye simba zvishoma kumusoro. Ndinovimba mavhiki mashanu anotevera anoenda mushe mushe.
M N. Yakaongororwa naM.
Inguva yangu yekutanga kuyedza sarms mushure mekunge shamwari yangu yanditaurira nezve ruzivo rwake
Ndanga ndichitora izvi kweinopfuura vhiki chete zvino uye mhasuru dzakanyanya kusimba asi handizvo chete.
Ndinovatora pavanomuka pamazuva ekudzidzira uye ini ndave nekutsungirira kwetsandanyama uyezve mushure mekurovedza muviri ini ndine nzara inoshamisa zvisingaite pandakanga ndisiri kutora izvi uye ndaigona kumirira kwechinguva kuti ndidye.